पाठेघरको मुखको क्यान्सर जाँच्ने प्याप स्मेयर के हो?
पुस २५, २०७३ सोमवार १४:०४:५६ प्रकाशित
नेपालमा पाठेघरको मुखको क्यान्सर महिलाहरुमा देखिने प्रमुख क्यान्सर हो। नेपालको कूल जनसंख्या मध्ये १५ वर्षभन्दा माथिका करिब एक करोड १६ लाख हाराहारीमा महिला छन्। १५ वर्षभन्दा माथिका महिलालाई पाठेघरको मुखको क्यान्सरको जोखिम हुन्छ।
पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब दुई हजार पाँच सय महिलामा पाठेघरको मुखको क्यान्सर देखापर्छ जसमध्ये करिब एक हजार चार सयको मृत्यु हुने गर्दछ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार सतप्रतिशत भाइरल संक्रमणबाट हुने एक मात्र क्यान्सर पाठेघरको मुखको क्यान्सर हो। ह्युमन प्यापिलोमा नामक भाइरसका कारण यो क्यान्सर हुन्छ। पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट जोगाउन भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन उपलब्ध छ।
क्यान्सर हुनुपूर्व नै पत्ता लगाउन सकिने भए पनि जनचेतनाको कमीका कारण पाठेघरको मुखको क्यान्सर पीडित महिलाको सङ्ख्या बढ्दो छ। भाइरसको सङ्क्रमणलाई प्रि क्यान्सर भनिन्छ। यो भाइरसले पाठेघरको मुखलाई लक्षित गरी आक्रमण गर्छ। समयमै सङ्क्रमण पत्ता लगाउन नसके ८-१० वर्षपछि यो क्यान्सरमा परिणत हुन्छ। सङ्क्रमण भएरनभएको प्याप स्मेयर टेस्ट गरेर पत्ता लगाउन सकिन्छ।
के हो प्याप स्मेयर टेस्ट?
प्याप स्मेयर टेस्टलाई पाठेघरको मुखको पानीको जाँच अर्थात् गर्भासय स्राव परीक्षण भनिन्छ। यो एउटा सहिलो जाँच विधि हो। यो जाँच गराउँदा महिलालाई धेरै झन्झट र दुःख हुँदैन।
प्याप स्मेयर टेस्ट गर्दा स्त्रीरोग विशेषज्ञले पाठेघरको मुखबाट कोष निकालेर एउटा सिसामा फैलाएर प्याथोलोजिस्ट कहाँ पठाउँछन्। प्याथोलोजिस्टले माइक्रोस्कोपमा ती कोषहरुलाई हेरेपछि त्यसमा संक्रमण रहेको वा क्यान्सर नै रहेको भन्ने पत्ता लाग्छ।
कहिले गर्ने टेस्ट?
अमेरिकन क्यान्सर सोसाइटीका अनुसार २१ देखि ६५ वर्ष उमेरका महिलाले यसको परीक्षण गराउनुपर्छ। यो परीक्षण पहिला ६ महिनाको फरकमा तीनपटक गर्नुपर्छ।
यदि कुनै महिलाको पूरै पाठेघरको शल्यक्रिया गरेको छ भने उनीहरुले यो जाँच गराउनु पर्दैन। गर्भवती भएको बेलामा पनि यो जाँच गर्न मिल्छ। यो टेस्ट ५ देखि १५ मिनेटमा गर्न सकिन्छ। प्याप स्मेयर गर्दा दुई दिनअगाडि देखि यौन सम्पर्क गर्नु हुँदैन। साथै, यो परीक्षण महिनावारी भएको बेला गर्न मिल्दैन। यो परीक्षणका लागि सकभर एक हप्ताअघि एन्टिबायोटिक औषधि खानु हुँदैन।
नियन्त्रणका लागि के हुँदैछ
स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशभरका सरकारी अस्पताललाई पाठेघरको मुखको क्यान्सर परीक्षण सेवा प्याप स्मेयर टेस्ट निःशुल्क उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।
सरकारले ह्युमन प्यापिलोमा भाइरसको भ्याक्सिनेसन कार्यक्रम पनि चलाएको छ। सरकारले गत वर्षको फागुनमा कास्की र चितवनमा खोप कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। ६ महिनाको अन्तरमा दुई चरणसम्म दिइने खोपको दोस्रोचरण गत भदौमा दिइएको थियो। तर, अझै यस क्यान्सरबारे जनचेतनाको कमीले गर्दा निर्मूल पार्न सकिने क्यान्सर हाम्रो देशमा महिलाको मृत्युको प्रमुख कारण बनिरहेको छ।
(प्याथोलोजिस्ट डा। मैनाली लाइफ लाइन अस्पताल दमकमा कार्यरत छन्।)